संविधान दिवस र हाम्रो कर्तव्य :: Setopati
संयोग पनेरु असोज ६
सम्पादकीय नोट: हामीले केटाकेटीहरूका लेख शृंखला सुरू गरेका छौं। आफ्ना नानीबाबुले नेपाली भाषामा लेखेका अनुभव, कथा, कविता, निबन्ध लगायत सिर्जनात्मक रचना तल दिइएको इमेल ठेगानामा पठाउनुहोस्, हामी प्रकाशित गर्नेछौं। लेख पठाउँदा फोटोसहित स्कुलको नाम र कक्षा पनि खुलाउनुहोला।
असोज ३ गते संविधान दिवस हो। यो दिन नेपाली इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण दिन हो।
पाँच वर्षअगाडि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान हो यो। यो संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ त्यसैले आजको दिन नेपालको इतिहासमा एक गौरवशाली दिन पनि हो।
हामी नेपालीहरू बितेका सात दशकदेखि यही दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौं। यो दिन ल्याउन थुप्रै सहिदहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यसैले संविधान दिवसमा हामीले सहिदहरूलाई पनि सम्झनुपर्छ।
संविधान दिवस स्वतन्त्रता मनाउने दिन मात्र होइन, हाम्रो उपलब्धि मनाउने दिन पनि हो।
वि. सं. २०७२ असोज ३ गते नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम भएको भनी लेखिएको संविधान नेपालको पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी गर्नुभएको हो। यस दिवसलाई राष्ट्रिय चाडको रूपमा मनाइन्छ।
यस दिन चिनाउन र राष्ट्रिय उत्सव मनाउन नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ। यस दिनमा नेपाली सेनाले टुँडिखेलमा भव्य कार्यक्रम गर्दछ। जहाजबाट संविधान दिवस लेखिएको एक रातो कपडाको पाटी, बेलुन र फूलहरू खसाइन्छ। त्यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल स्काउटले टुँडिखेलमा परेड खेल्छन्।
संविधान देशको मूल कानुन हो। यसमा देशमा कस्तो शासन व्यवस्था हुने, देश सञ्चालन कसरी गर्ने र हाम्रा हकअधिकार के-के हुन भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ। यस संविधानले बालअधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ। हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनजस्ता हक अधिकार यस संविधानले दिएको छ।
यस संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई हामीले राम्रोसँग उपयोग गर्नुपर्छ। यो अधिकारसँगै हामीले आफ्नो कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्छ। यो हाम्रो पढ्ने उमेर हो। हामीले लगनशील भएर पढ्नुपर्छ। हामीले समाजमा भएका कुरीतिलाई हटाउने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। हामीले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार पनि पाएका छौं तर हामीले जे पायो त्यही खाने, आचरण नसुधार्ने र सकारात्मक सोचको विकास नगर्ने हो भने हामीले पाएको अधिकारको सही उपयोग हुन सक्दैन।
त्यसैले हामी सम्पूर्ण नेपालीले संविधान दिवस मनाउँदा सहिद सम्झनुपर्छ र त्यसलाई खेर जान दिनु हुँदैन। त्यसैगरी संविधानले दिएका हक अधिकारसँगै आफ्नो कर्तव्य पनि भुल्नु हुँदैन अनि मात्र संविधान दिवस मनाएको सार्थक हुनेछ।
(संयोग पनेरु बूढानीलकण्ठ स्कुल काठमाडौँमा कक्षा ६मा अध्यनरत छन्।)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ६, २०७७, ०६:२०:००
मेराे प्याराे भाइ
कोरोनाको अन्त्य भएको दिन
नेपाली भएकोमा छ गर्व
कहिले बदलिन्छ यो समाज?
सावधानी नअपनाए पछुताउनु पर्ला!